Jaamacada Bariga Africa oo laga furay Buuhoodle. (Sawiro) – Radio Daljir
Jaamacada Bariga Africa oo laga furay Buuhoodle. (Sawiro)
Oktoobar 4, 2012 8:04 b 0
Buuhoodle Oct-3-Jaamacada Bariga Africa oo ka dhisan gobolada kala duwan ee Puntland ayaa maanta si rasmi ah magaalada Buuhoodle uga hirgelisey qayb Cusub oo kamid ah faracyadda Jaamacada.
Qaybta Cusub ee maanta ay Jaamacada Bariga ka furtay magaalada Buuhoodle, ayaa loo qabtay munaasibad furitaan ah oo ay kasoo qayb galeen dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshads gobolka Cayn iyo wafuud ka socdey Jaamacado kala duwan ee kuyaala dalka Somalia.
Waftiyada maanta ka qayb galay furitaanka Jaamacada Bariga Africa Qaybteeda Buuhoodle waxay kalaa yimaadeen, magaalooyinka, Boosaaso, Garoowe, Laascaanood, Galkacyo iyo degmooyinka gobolka Cayn sida degmada Widhwidh.
Ugu horayn waxaa munaasibada ka hadlay maamulaha Jaamacada Bariga Africa ee Buuhoodle Dr Cabdi Shaafi Axmed Cali Wuxuuna mahadcelin ujeediyey waftiyada ka yimid Jaamacadaha kala duwan ee ku yaalada Boosaaso, Garoowe, Laascaanood, iyo Galkacyo, kuwaasoo safar dheer usoo galay sidii ay uga qayb geli lahaayeen furitaanka Jaamacada Buuhoodle.
Sh Cabdinaasir X Axmed oo kamid ah culimada waaweyn ee Somalida, wakiilna u ahaa ?uga ahaa Jaamacada Bariga Africa ?inuu ka furo Buuhoodle ayaa hadal halkaasi ka jeediyey isagoo Jaamacada ugu baaqay inay dadka fahan dhab ah kasiiso diinta islaamka ayna meesha ka saarto waxa uu ugu yeeray fasiraadaha khaldan ee laga bixiyo diinta islaamka.
Sh Cabdinaasir wuxuu canbaareeyey falal ay ku kacaan dad ku adeeganaya magaca diinta Islaamka sida uu hadalka u dhigay, wuxuuna sheegay falalkaasi inay kamid yihiin, Dilalka qorshaysan, Qaraxyada, Isqarxinta iyo Falal kale oo lamid ah wuxuuna sheegay in diinta islaamku aysan ogolayn waxyaabahaasi.
Dr Axmed Diiriye oo kamid ah barayaasha Jaamacada Bariga Africa Faraceeda Garoowe ayaa kamid ahaa masuuliyiintii madashaasi hadalka ka jeediyey, Dr Axmed wuxuu bulshada Buuhoodle ugu baaqay inay sameeyeen midnimo si loo helo horumar kan ka ballaaran.
Prof :Cabdirsaaq Maxamed Lafoole oo ah maamulaha Jaamacada Nugaal ee Laascaanood ayaa isna kamid ahaa Martisharaftii kasoo qayb galay Munaasibada Furitaanka Jaamacada Buuhoodle oo qayb ka ah Bariga Africa ayaa bulshada gobolka ugu baaqay inay ku dadaalaan waxbarashada.
Prof Lafoole wuxuu bulshada kula dardaarmay inaysan waxbarashada ka gaabin iyagoo ku andacoonaya nabadgelyo xumo,wuxuu sheegay in aduunka wadamada ugu nabadgelyada xun u horeeyaan dhanka tacliinta isagoo tusaale usoo qaatay wadanka Falastiin.
Munaasibada sidooo kale Waxaa ka hadlay masuuliyiin ka socdey Jaamacada Puntland University of Science and Technology ?oo ku taalada magaalada Galkacyo, Masuuliyiin ka socdey Jaamacada Bariga Africa qaybteeda Boosaaso, cuqaasha gobolka Cayn, Culimo, Dhalinyaro, Siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada Buuhoodle.
Ugu danbayna Waxaa munaasibada soo xidhay Suldaan Siciid Cismaan Cali oo kamid ah Isimada waaweyn ee gobolka Cayn.
Waa markii u horeysey oo Jaamacad Noocan ah laga hirgeliyo magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn, waxaana Jaamacadan bariga Africa furitaankeedu noqonayaa mid waxbadan kusoo kordhiya Tacliinta gobolka Cayn oo markii u horeysey abid gaadha heer Jaamacadeed.
Dood dhex martay Madaxweynaha Maraykanka Obama iyo ninka la tartamaya ee Mitt Romney (Dhegayso)
DHAGAYSO+COD ?Maxba kama jiraan hadalkii Garaadku uu sheegay, Laasqorayna dakad ayaa laga qodayaa? Xildhibaan Axmed Cali Xaashi.